Camera rakibnay salka of Earth ee qotada dheer Lake - Rule News
Camera rakibnay salka of Earth ee qotada dheer Lake
Seynisyahanno ku rakibtay camera video ah on hoose ee Lake Baikal oo gudbin doonaa footage live internetka. xiiseyneyso Kuwa u arki karaan nolosha dunida ee gudubno qotada dheer, si qoto dheer ugu badan ee kaas oo lagu dhacdhaco a 1,642 mitir (5,287 cagaha.), halka ay si qoto dheer hoose waa 744 mitir (2,440 cagaha).
saynisyahano ayaa helay in waqti lagu rakibayo kaamirooyin hor u gudubno, waxaa daboolay baraf. Mashruucu wuxuu tusinayaa rakibidda camera labaad at qoto dheer ah xitaa weyn ee mustaqbalka dhow. Wadar ah ka badan 15 kamaradaha la qorsheeyey in la muujinaya nolosha quuska gudubno ee.
24145	0 Facebook, International Traffic in Regulations Arms, Irkutsk, Lake, Lake Baikal, Russia, Siberia, Soundcheck, Telegraph Agency of Midowga Soofiyeeti, quuska